किन वित्तीय समावेशी अर्थतन्त्र ? - Karobar National Economic Daily
किन वित्तीय समावेशी अर्थतन्त्र ?
query_builderAugust 6, 2017 7:54 AM supervisor_accountमार्क सुजम्यान, प्रोजेक्ट सिन्डिकेट visibility516
जी–२० सम्मेलनको विषय आपसमा आबद्ध विश्वलाई आकृति दिने भन्ने थियो । जलवायु परिवर्तन, प्रतिआतंकवाद, व्यापारजस्ता एजेन्डा विश्व समृद्धिका लागि आवश्यक भए पनि डिजिटल वित्तीय समावेशिता पनि कम महत्वकाे छैन ।
२ अर्ब वयस्क आधारभूत वित्तीय सेवाको पहुँचबाहिर छन् । डिजिटल वित्तीय समोविशिताको पहुँच फराकिलो हुँदै छ । मोबाइलबाट खाता सञ्चालनको पहुँच बढ््दै छ, जुन सस्तो र सहज पनि छ । विपन्नहरूले यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न थालेपछि दुईवटा कुरा हुन्छ ।
पहिलो, उनीहरू बचत, भुक्तानी, ऋण, बीमा आदिबाट प्रभावकारी ढंगले पैसा व्यवस्थापन गर्छन् । दोस्रो, साना कारोबारका लागि समय बचत गर्न थाल्छन् र उत्पादनशील काममा खर्चन्छन् अथवा आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्छन् । अतिरिक्त आय र बचतले उनीहरूलाई आर्थिक संकटबाट बचाउँछ ।
डिजिटल वित्तीय समावेशबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने रूपान्तरण प्रभावबारे ठोस प्रमाण भने छैन । केन्याको उदाहरण लिऊँ । त्यहाँ मोबाइल मनीबाट झन्डै दुई खालका घरपरिवारलाई चरम गरिबीबाट मुक्त ग-यो । डिजिटल वित्तीय उपकरणको विस्तारले २०२५ सम्ममा विकासशील देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३.७ ट्रिलियन डलर पुग्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
बढी वित्तीय समावेशिताको प्रतिबद्धतालाई पुँजीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी नीतिहरूको आवश्यकता छ । अघिल्लो वर्ष जी–२० ले विभिन्न देशका सरकारले अपनाएकाको प्रभावकारी आठ प्रभावकारी रणनीतिमध्ये डिजिटल वित्तीय समावेशिता पनि एक हो भनेको छ ।
यस सन्दर्भमा चीनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उसले नवप्रवर्तन र जोखिमबीच कसरी सन्तुलन राख्ने हो, त्यो प्रदर्शन गर्दै छ । अनलाइन भुक्तानी सेवा दिने अलिपेले व्यवसाय सुरु गर्दा नियामकहरूले नयाँ वित्तीय सेवाप्रदाता भोगेका थिए । त्यसैले यसका लागि कस्तो नियमन आवश्यक छ भनेर हेरेर सिके । त्यसैले अलिपे विश्वको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन भुक्तानी प्लेटफर्म बन्यो ।
नियामकहरूले अर्को मुख्य चुनौती समाधान गर्दै छन् : नयाँ एकाउन्ट होल्डरका लागि व्यक्तिगत पहिचानको अभाव । धेरै विकासशील देशमा यसको समस्या छ । यो हैरानीलाई समाधान गर्न मेक्सिको र तान्जानियाले फोन नम्बरबाट मात्रै साइन अप हुन सक्ने व्यवस्था मिलाए, जुन दुवै देशमा सफल भयो ।
यसैबीच भारतले भने व्यापक डिजिटल परिचय कार्यक्रम सुरु गर्दै छ, जसले औंठाछाप र बायोमेट्रिक डाटा संकलन गर्छ । एक अर्ब डाटा तयार भइसकेको छ र एकतिहाइ तथ्यांक बैंक प्रणालीसँग जोडिइसकेको छ ।
सरकारले सहयोग गर्ने हो भने डिजिटल वित्तीय उपकरणको सेवा उपभोक्ताका लागि सहज पार्न र सञ्चालन खर्च कम गर्न सकिन्छ । अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको खासै अनुभव नभएका उपयोगकर्ताले अनुकूलन नीतिबाट फाइदा लिन सक्छन्, जसले वित्तीय साक्षरता पनि बढाउँछ ।
जी–२० को प्रतिवेदनले गरिबीसँग भिड्न डिजिटल वित्तीय समावेशिता शक्तिशाली उपकरण हुने स्पष्ट पारेको छ । तर, धनी देशहरू पनि यसबाट फाइदा लिन सक्छन्, किनभने डिजिटल वित्तीय समावेशिताले उपभोक्ताको गतिविधि र व्यापार बढाउँछ ।
चीन अध्यक्ष भएको गत वर्षमा जी–२० ले डिजिटल वित्तीय सेवालाई विश्वको प्राथमिकता बनाउने भनेको थियो, जुन अहिले पनि कायमै छ । यसले अर्बौं मानिसलाई विश्वअर्थतन्त्रसँगको पहुँच बढाउन सहयोग गर्नेछ । खास गरी विकासशील देशका विपन्न, प्रौढ र महिलाहरूका लागि ।
विश्वले वित्तीय समावेशीको संयन्त्रलाई प्राप्त गर्दै छ र बुझ्दै छ । बैंकमा पुग्न नसक्नेहरूका लागि यो ठूलो समाचार हो, तर सम्मेलनमा एजेन्डा राख्नु मात्रै भने पर्याप्त छैन । नवप्रवर्तनलाई जारी राख्न विश्व चुनौतीले स्थानीय समाधान खोज्नु आवश्यक छ; जुन चीन, केन्यालगायतका देशले गरिरहेका छन् ।
चीन जलवायु परिवर्तन जी–२० सम्मेलन